Somalia Archives - Page 144 of 217 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 22, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Arbaco ah loo caleemo-saaray madaxweynaha 9-aad ee Soomaaliya. Munaasabada caleemo-saarka ayaa lagu qabtay goobta Afisyoone ee gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Khudbadiisii, waxa uu balanqaaday in uu […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha dowladaha deriska la ah dalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco soo gaaray caasimada Soomaaliya ee Muqdisho si ay uga qaybgalaan caleemo-saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, Raysulwasaaraha […]
London-(Puntland Mirror) Boqortooyada Ingiriiska ayaa siin doonta Soomaaliya caawimaad dhaqaale oo gaaraysa £100 milyan oo Euro ah si wax looga qabto digniinta macaluusha ee dalka ka jirta. Dhaqaalaha gargaarka ah ee ay UK balanqaaday ayaa […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ilaa iyo todobo maraakiib jariif ah oo ajnabi ah ayaa lagu soo waramayaa in ay dhawaan soo gaareen xeebta magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Maraakiibta ayaa ruqsad ka helay dowladda Puntland in ay […]
February 20, 2017 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada maamul gooboleedka Jubbaland ayaa geeriyooday kadib markii ay la qaraxday miinada dhulka lagu aaso maanta oo Isniin ah, sida ay ilo-wareeyadu xaqiijiyeen. Ciidamada ayaa marayay deegaanka […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa booqday dhibanayaashii ku dhaawacmay qarax gaari oo shalay oo Sabti ahayd ka dhacay suuq kuyaala gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, kuwaasoo hadda lagu dabiibayo isbitaalada kala duwan ee […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada ka dhalatay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay suuq kuyaala gudaha magaalada Muqdisho ayaa gaartay 39 qof, sida ay sheegeen saraakiil caafimaad. Qaraxa ayaa dhacay kadib markii gaari walxaha qarxa laga […]
February 19, 2017 Abdi Omar Bile 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Agaasimihii hore ee haayada macdanta iyo batroolka Puntland ayaa maanta xilka ku wareejiyay agaasime cusub oo dhawaan madaxweynuhu soo magacaabay. Munaasabad ka dhacday magaalada Boosaaso, ayaa agaasimihii hore Ciise Maxamuud Dholowaa shaqada ku […]
« 1 … 143 144 145 … 217 »